Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Show Top
showtop.info is committed to ensuring that your privacy is protected. Ma in aan kaa dalabno inaad bixiso macluumaad gaar ah kuwaas oo aad loo garan karaa marka la isticmaalayo internetka, ka dibna waxaa laguu xaqiijin karaa in kaliya loo isticmaali doonaa si waafaqsan hadal asturan this.
showtop.info laga yaabaa in nidaamkan waqti ka bedesho waqti la xariirta this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from: November 2015
Magaca iyo shaqo horyaalka
la xiriir macluumaad oo ay ku jiraan email address
xogta dadka sida koodhka boostada, doorbidida iyo danaha
macluumaad kale oo la xidhiidha sahanka macaamiisha iyo / ama dalabyo
Waxa aan la macluumaadka aan ku soo ururin sameeyo
Waxaan u baahan macluumaadkan si ay u fahmaan baahiyahaaga oo ay kuu siiyaan adeeg wanaagsan, iyo gaar ahaan sababaha soo socda:
Laga yaabaa in aan macluumaadka u isticmaali si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadayada
Xilliyo laga yaabaa in aan u soo diri emails xayaysiis ah oo ku saabsan waxyaabaha cusub, dalabyo gaar ah ama macluumaad kale oo aynu u malayno aad ka heli kartaa xiiso leh oo isticmaalaya cinwaanka email oo aad bixisay.
Muddo markii la joogaba, Waxa kale oo aanu macluumaadkaaga u isticmaali karaa inuu kula soo xidhiidho ujeedooyin cilmi suuqa. Waxaa laga yaabaa inaan waxaad la xiriiri by email, phone, fax ama mail. Waxaa laga yaabaa inaan xogta ku isticmaalaan si ay u astaysto website-ka sida ay danta aad.
Waxaa naga go'an in la hubiyo in macluumaadkaaga waa aamin. Si looga hortago helitaanka aan la ogolayn ama bixinta, waxaan ku riday oo jirka meel ku haboon, habka elektaroonikada ah iyo maareynta si loo ilaaliyo iyo aamin macluumaadka online aan ururino.
Waa maxay cookie ah?
Kukiyada waa files qoraalka ay ku jiraan xaddi yar oo macluumaad ah oo loo soo bixi in qalab aad marka aad booqato website ka. Kukiyada waxaa ka dibna dib ugu soo website-ka soo diray asal ahaan booqasho kasta xiga, ama in website kale oo aqoonsan in cookie. Kukiyada waa mid waxtar leh, sababtoo ah waxay u ogolaadaan website ah in la aqoonsado qalab user ee.
Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cookies ka heli kartaa:
Wixii video ah oo ku saabsan booqashada cookies eegno cookies
Kukiyada sameeyaan shaqooyin badan oo kala duwan, sida daynin waxaad eegi dhexeeya boggaga si hufan, xusuusto aad door bidayso, iyo guud ahaan la hagaajiyo waayo-aragnimo user. Waxay sidoo kale kaa caawin kara si loo hubiyo in xayeysiiska aad u aragto internetka badan yihiin ku habboon adiga iyo danahaaga in. The cookies isticmaalo internetka ayaa lagu kala saaraa oo ku salaysan qaybaha laga helay hage ICC UK cookie.
Category 1: cookies si adag loo baahan yahay
Cookies Kuwani waa lagama maarmaan si ay u laguu suurogeliyo in aad soc website-ka iyo qaababka ay u isticmaalaan, sida helitaanka meelo ammaan ah oo ah website-. Haddii aan adeegyadan cookies aad codsatay, sida dambiilo ama e-biilasha, ma la siin karaa.
Category 2: cookies qaab
Cookies Kuwani ururiyaan macluumaad ku saabsan sida ay u isticmaalaan website kooxda martida ah, Tusaale ahaan, taas oo soo booqda pages tagaan inta badan si, iyo haddii ay farriimo qalad ka bogagga internetka. Cookies ma ururiyaan macluumaad in tilmaamaysaa booqde. Dhammaan macluumaadka cookies, kuwaas oo u soo ururin waa qallafsan oo sidaas daraaddeed si qarsoodi ah. Waxaa loo isticmaalaa oo kaliya si loo hagaajiyo sida a shuqullada website.
By isticmaalaya website, aad ogolaato in aan kartaa nooca cookies on qalab aad.
Category 3: cookies shaqeynayaan
Cookies waxay u saamixi website-ka in la xasuusto doorashada aad samaysay (sida magacaaga user, afka ama gobolka aad ku sugan tahay) iyo in la siiyo wanaajiyey, muuqaalada shakhsi dheeraad ah. Tusaale ahaan, website laga yaabaa inay awoodaan inay ku siiyaan wararka cimilada deegaanka ama news gaadiidka, iyadoo lagu kaydinayo in cookie ah gobolka kuwaas oo aad hadda ku yaalla. Cookies waxa kale oo loo isticmaali karaa in la xasuusto isbedel aad u dhigay qoraalka size, noocyada and other parts of web pages that you can customise. Waxay sidoo kale loo isticmaali karaa si ay u bixiyaan adeegyada aad codsatay sida daawashada video ah ama faallo ah oo blog. Macluumaadka cookies kuwaas ururiyaan la magac laga yaabaa in ay aad iyo hawl dhirta on websites kale ma u helida.
Category 4: beegsanayo cookies ama cookies advertising
Cookies waxaa loo isticmaalaa si loo bixiyo xayaysiisyada dheeraad ah oo ku habboon adiga iyo danahaaga si Waxay sidoo kale la isticmaalaa si loo xaddido tirada inta jeer ee aad ku aragto xayaysiin ah iyo sidoo kale kaa caawin la ogaado waxtarka Ololaha ogaysiiskan ayaa. Waxa ay inta badan ag dhigay shabakadaha advertising la ogolaansho website shaqaale ee. Waxay aad xusuusataa in aad soo booqatay website iyo macluumaadkan aan la wadaagno hay'adaha kale sida xayeysiiya. Marar badan oo lagu beegsanayo ama cookies advertising Waxaa lala xiriirin doonaa inay ka shaqeynayaan goobta ay bixiyaan hay'adaha kale.
Bogga internetka waxaa ku jiri kara xiraya boggag kale oo xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, marka aad isticmaali xiriiriye inuu ka tago goobta, waa inaad ogaataa in aynaan haysan wax gacanta website in kale. Sidaa darteed, waxaan ka mas'uul ah ilaalinta iyo u gaarka ah ee wixii macluumaad ah oo aad ku bixiso halka booqanaya goobaha sida iyo goobaha sida ma noqon karo aan maamulaa hadal asturan this. Waa in aad taxaddar iyo la eego warbixinta qoraalka gaarka ah ee lagu dabaqi karo website-ka ee su'aasha.
Waxaad dooran kartaa in aad xaddido ururinta ama isticmaalka macluumaadka shakhsiyeed ee siyaabaha soo socda:
mar kasta oo lagu weydiiyo in aad buuxisid foomka lagu qoray website-ka, raadiyo sanduuqa waxaad riixi kartaa si ay u muujiyaan in aadan rabin in macluumaadka in ay isticmaalaan qof oo ujeedadu tahay suuq toos ah
Waxaan aysan iibin doonin, qaybiyo ama kiraysan macluumaadkaaga shakhsiyeed in labada dhinac saddexaad haddii aan haysanno ogolaansho ama waxaa looga baahan yahay sharci ahaan inay sidaa sameeyaan. Waxaan u adeegsan karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed si aad u soo dirta warbixin ku saabsan kor uqaadida labada dhinac saddexaad oo aynu u malayno in aad ka heli kartaa oo xiiso leh haddii aad noo sheegto in aad rabto in aad tani u dhacdo.